Kugovera webhusaiti kunongoreva kuve nechokwadi chekuti webhusaiti yako inogona kuwanikwa paWorld Wide Web (WWW). Izvi zvinowanzoitwa mune imwe yenzira mbiri. Iwe unogona kubhadhara kuitisa neyevashandisi vevhisi kana iwe unogona kuitisa iwe pachako pachako server – isu tichatarisa munzira dzose dziri muchinyorwa chino.
Mashandiro Ekuita Webhu – Mawebhusaiti mafaira – akadai seHTML, mifananidzo, mavhidhiyo, akachengetwa mumaseva akabatana neInternet. Kana vashandisi vakuda kushanyira webhusaiti yako, ivo vanonyora yako webhusaiti kero mune browser ravo uye komputa yavo inozobatana kune server yako. Mapeji ako ewebhu anozoendeswa kune vashandisi kuburikidza neInternet-blaaier.
1 Maitiro Ekubata Siti Uchishandisa Anogamuchira Anopa
1.1 1. Sarudza kuti ndeupi rudzi rwewebhu webhusaiti yauri kuvaka
1.2 2. Enzanisa Webhu Yekutapa Mhando
1.2.1 Mhando nhatu dzewebhu gasheer
1.2.3 Yakagoverwa vs VPS / Cloud vs Yakatsaurirwa Hosting
1.3 3. Sarudza uye Tenga iyo Webhu Yekushandisa Kuronga
1.3.1 Webhu Yekutambira yeNewbies / MaWebhu ari nyore
1.3.2 Webhu Inotambira Bhizinesi / Kuresa mawebhusaiti
1.3.3 Webhu yeWebhu yeVagadziri / Vashandisi Vepamberi
1.4 4. Tenga Domain uye Chirongwa
1.5 5. Fambisa / Gadzira Yako Webhusaiti-bediener
2 Maitiro Ekubata Nzvimbo Saiti Pano
2.0.1 Zvakanakira kuzvibata
2.0.2 Kuchengetedzeka kwekuzvibata kwako
2.1 1. Sarudza Zvishandiso uye sagteware
2.2 2. Ita shuwa yakakwana bandwydte
2.3 3. Kugadzira uye Kupa Webhusaiti
3 Ndeipi Sarudzo Yakanakisa Kubata Yeyako Webhusaiti?
4 Kugadzirisa Zvako Zvako Zvigadziriso
4.0.1 1. Sarudza CMS ine mwero
4.0.2 2. Vir foramu – Shandisa miniBB panzvimbo yeSMF
4.0.3 3. Shandisa yechitatu-bato retsamba mupetsi
4.0.4 4. Shandisa-kasstelsel
4.0.5 5. Nguva dzose rega zvinyorwa zve spam
4.0.6 6. Kana zvichikwanisika, shandisa kunze zvinyorwa
4.0.7 7. Shandisa wechitatu-bato faira yekubata masevhisi
4.0.8 8. Nguva dzose aflaai uye susa mafaira egi
5 Webhusaiti Inotarisira FAQ
5.1 Kuverenga Zvakare
5.1.1 Zvakawanda pakubata webhusaiti
5.1.2 Pakusika webhusaiti
Maitiro Ekubata Siti Uchishandisa Anogamuchira Anopa
Kushandisa mubatsiri webasa ndiyo nzira yakapusa yekubata webhusaiti. Iwe unogona kubhadhara kamari kadiki pamwedzi uye uchivimba nemupi webasa kuti atarisire zvese zvako zvishandiso, zvigadzirwa, uye zvimwe zvinodiwa zvine chekuita nazvo.
Kubatsira kwekutambira nemushandi webasa
Tsigiro inowanzo kuwanikwa nyore
Hapana kudiwa kwekugadziriswa kwemahara
Chengetedzo yekutambira pamwe nemubatsiri webasa
Pangave paine zvinorambidzwa pabasa
Kusarudzwa kushoma mukubata nzvimbo
Aya matanho ekutora webhusaiti nemubatiri webasa webhusaiti.
1. Sarudza kuti ndeupi rudzi rwewebhu webhusaiti yauri kuvaka
Kune maviri epamusoro mataipi emawebhusaiti; yakasimba uye ine simba.
Mawebhusaiti akaoma anogona kuvakirwa uchishandisa icho Chaunoona Ndochiva Chaunowana (WYSIWYG) chishandiso uye wozoendeswa kune iyo account yekutambira.
Masimba ane simba anonyanya kushanda-anofambiswa uye anoshandisa zvinyorwa, dhatabheti, uye zvimwe zvishandiso kuburitsa zvimwe zvikamu zvesaiti iri nhunzi. WordPress uye Joomla mienzaniso yezvakajairwa Zvekushandisa System (CMS) zvishandiso zvakakurumbira nhasi. Dzimwe dzakadai seMagento uye PrestaShop dzinoshandiswa kune eCommerce mawebhusaiti.
Yako webhu saiti yekusarudza zvinoenderana nerudzi rwewebhusaiti yauri kuvaka. Iyo bhajeti yewebhu inomiririra se Hostinger ($ 0,99 / maand) yaizokwana saiti yakapusa static webhusaiti; nepo masaiti ane simba achizoda zvimwe seva zviwanikwa.
2. Enzanisa Webhu Yekutapa Mhando
Zvakawanda siste kune dzakawanda dzakasiyana mhando dzemotokari, webhusaiti webhusaiti zvakare inouya mune akasiyana geur. Semuenzaniso, kugovana kwekugovana ndiko zvakachipa uye zviri nyore kubata – iwo akafanana nemotokari dzepasi dzepasi.
Sezvo rudzi rweweji yekubatira yewebhu kumusoro, saka zvakare mutengo unobatanidzwa uye kazhinji kuoma kwekutonga en yakagadzirirwa rekening. Semuenzaniso, mukati VPS kubata iwe unofanirwa kutarisira kwete chete iyo yekugamuchira ruzivo asiwo nharaunda iyo iri kuitirwa mukati.
Mhando nhatu dzewebhu gasheer
Muchidimbu, mhando dzakajairika dzekutambira dziri
VPS / Cloud inobata
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti webhu zvinoshandiswa uye webhu saiti hazvisi izvo zvakafanana. Mamwe is ‘n webhost anopa zvirongwa zvakaita seWordPress Hosting, PrestaShop Hosting, WooCommerce Hosting, nezvimwewo. Idzi hadzisi chaizvo mhando dzekutambira, asi dzinoitirwa kukwezva varimisi vanogona kunge vasingazive nezve chaiyo webhu yekutambira mazwi. Iyi yekugamuchira inopa vanongonyengedza vashandisi nemazita evanozivikanwa webhu sewebhu.
Semuenzaniso, havazi vanhu vazhinji vanogona kuziva mutsauko wekugamuchira mhando, asi vazhinji vanozoziva izwi rekuti ‘WordPress’.
Rudzi rwewebhu webhusaiti iwe rwauchazoda kazhinji rwunotsanangurwa ne:
Ukuru het verkeer hwamunotarisira ruit yako webhusaiti, kana
Chero chipi zvacho chaunoda chinodiwa webhusaiti yako.
Mazhinji mawebhusaiti ari kutotanga kubuda kazhinji anowanzova nehupamhi hwemagetsi (kureva vashanyi vashoma) uye akagovana maakaunti ekugovana anozova akanaka kune iwo. Akawanda akagoverwa maakaunti achauyawo nevashandisi vekuisa (sekunge Softaculous), asi kuti uve nechokwadi chekuti zvido zvako zvinosangana, bvunza muenzi kana toepassing yauri kuda inogona kuiswa pane enyo rekening yauri kutarisa.
Yakagoverwa vs VPS / Cloud vs Yakatsaurirwa Hosting
Panyaya yekuita uye manejimendi, yewebhu yega yega rudzi rwemhando inewo zvadzo zvakanakira uye zvakashata saka sarudza zvako maererano.
Gedeelde gasheer kazhinji yakachipa uye iri nyore kubata asi haina kuuya neyekudzora mashandiro uye haakwanisi kubata yakakwira yakawanda yemotokari. Unogona kry vakagovana mabasa ekutambira kubva A2 Hosting, Hostinger, InMotion Hosting
VPS / Cloud Kubata inodhura uye inochinja-chinja zvinhu zvakawanda. Vashandisi vanokwanisa kuisa chero chinhu chavanenge vachizoda pane aya maakaunzi uye kukwanisa kurarama nehuwandu hwakasiyana hwepamhepo zvichienderana nekuti imarii inobhadharwa. Unogona tora VPS kana Cloud inobata masevhisi kubva Digital Ocean, Interserver, SiteGround.
Bedieners toegewy ndidzo dzakaomesesa kubata uye kudhura zvakanyanya. Ivo vaneemasimba kwazvo uye vanogona kutungamirirwa pasi chaipo panogarwa nhanho nevatongi. AltusHost, InMotion Hosting, uye TMD Hosting kupa masevhisi akazvitsaurira.
3. Sarudza uye Tenga iyo Webhu Yekushandisa Kuronga
Kunyangwe mukati memhando dzekugamuchira, vashandisi vebasa vanowanzove neakasiyana zvirongwa zviripo. Kusiyana kwakakosha muzvirongwa izvi kunowanzowanda muhuwandu hwezvinhu zvinowanikwa mumwe nemumwe. Izvo zvakawanda zviwanikwa ako webhusaiti, ruit vashanyi vakawanda zvavanogona kubata.
Kana zvasvika kune zviwanikwa-paneel webhosting, isu tiri kutaura nezvezvinhu zvitatu zvakakosha – verwerker (CPU), ndangariro (RAM), uye chengetedzo (HDD kan SSD). Izvi zvisinei hazvigaro shandura kune kuita kwakanaka kwewebhu inomiririra.
Munguva yapfuura hapana kumbove nenzira iri nyore yekutarisa mashandiro anoita webhu. Vazhinji vashandisi vaifanira kuvimba neongororo izvo zvinosuruvarisa, kazhinji kutora mapepa ekutora ekuitisa ezviitiko uye zvisingawanzo kugadzirisa izvo. Kuti upfuure izvi, edza kushandisa HostScore. Izvi zvinoreva kuti avo vanoongorora webhu maitiro ekuongorora vari vakanyanya kunaka.
Uyezve chengetedza kutarisa kwezvakawedzera kukosha ofte SSL yemahara, zita remuzinda, kushambadzira zvikwereti, muvaki webhusaiti, kana zvimwe zvinhu zvingakubatsira kuvaka kana kushambadzira webhusaiti yako.
Mamwe mawebhu anotapa anopawo zvimwe zvakanakira pazvirongwa zvinodhura zvakanyanya sekukosha kwakanyanya kana kuwedzerwa. Muenzaniso wakanaka weizvi ndizvo vakagovana zvirongwa zvekutamba paA2 Hosting. Zvirongwa zvinodhura kwazvo ruit izvo zvinoteedzana zvinouya 20X ‘Turbo’ zvekumhanya.
Kazhinji chaipo-mossie mekunge watenga webhu inomiririra, uchagamuchira e-pos yekugamuchira ine ruzivo-ruit yako yeku ungene yekuzivikanwa uye yezita-bediener. Stuur ‘n e-posadres per e-pos na yakachengeteka – ek moet u e-posadres stuur vir ‘n domein vir u bedieningspaneel en u bedieningspaneel. Screenshot inoratidza yangu e-pos met yekugamuchira kubva HostPapa.
Mushure mekuyedza uye kuongorora zvinopfuura makumi matanhatu zvevhisi masevhisi munguva yakapfuura, ndakakwanisa kudzikisa vamwe dzakanakisa kutambira sarudzo yekushandisa dzakasiyana-siyana.
Webhu Yekutambira yeNewbies / MaWebhu ari nyore
A2 Kubata (inskrywing teen $ 3.92 / maand)
Hostinger (aanmeld teen $ 0,99 per maand)
GreenGeeks (aanmeld teen $ 2,95 / maand)
Webhu Inotambira Bhizinesi / Kuresa mawebhusaiti
InMotion Hosting (aanmeld teen $ 3,99 / maand)
SiteGround (aanmelding teen $ 3,95 / maand)
Webhu yeWebhu yeVagadziri / Vashandisi Vepamberi
Kinsta (inskrywing teen $ 30 per maand)
LiquidWeb (aanmelding teen $ 29 per maand)
4. Tenga Domain uye Chirongwa
Iko kune yako webhusaiti webhusaiti ndiyo chaiyo nzvimbo en yako webhusaiti mafaera inogara, ek is unoda zita rezita kuitira kuti vashandisi vakwanise kuwana yako saiti Semakero chaiwo, imwe neimwe yakasarudzika.
Zvirongwa zvizhinji zvewebhusaiti zvewebhu nhasi zvinouya neazita remahara domein, saka ita shuwa kutarisa kana zvichishanda newebhu webhusaiti yaunoda kutarisira. Kana zvirizvo, ek is unogona kutarisira iro rezita rezita panguva imwe chete sere kana iwe uchibhadhara yako webhu saiti yekuronga.
Kana zvisiri, iwe uchafanira tenga izita rekutamba rakaparadzana. Izvi zvinogona kuitwa kaya kubva kunzvimbo imwechete iyoyo yawakaatenga chirongwa chekutambira kana mumwe mupi webasa. Kana iwe uchida kutenga zita rezita rakaparadzaniswa, ini zvikuru ndinokurudzira kuti utarise kune imwe nzvimbo.
Mazita emataini haasi akatarwa mitengo yezvinhu uye anowanzoenda kutengeswa. Vamwe vatengesi vanowanzove vane kutengesa kwakachipa pamazita emadhi uye kana iwe uine rombo iwe unogona kutora imwe yekuba. Namecheap semuenzaniso kazhinji yaive nemazita ekutumira ruit zvinosvika 98% kubviswa.
Kusarudzika kune izvi kana iwe uri wekutanga nguva saiti muridzi. Muchiitiko ichocho, kutenga zita rezita uye kutambira kubva kune rimwechete to sevhisi inogona kuita kuti zvinhu zvive nyore kwauri kuti ushande naye sekutanga.
5. Fambisa / Gadzira Yako Webhusaiti-bediener
Kamwe zita rako remazita uye webhu saiti yekuronga yakagadzirira yave nguva yekutama. Kutama kwenzvimbo kunogona kuoma, saka kana uri kuita izvi kekutanga, bvunza rubatsiro kubva kune wako mutsva wekugamuchira. Vamwe vanobata sevhisi vanopa yemahara nzvimbo kutama.
Kuti utange nzvimbo yekutsvaga paInMotion Hosting, tumira kune AMP dashibhodhi> Mashandiro eAunti> Ikufambirwa kweDaifaira yeWebhu. Dzvanya pano kuti utange InMotion pasina nzvimbo yekufambisa iko zvino.
Kana iwe wavaka yako webhusaiti munharaunda (pane yako pachako komputa) ipapo ingoendesa mafaera edu muwebhu server rako. Kuti uiteengesit inzvi iwe unogona kunge uchishandisa iyo File Manager mune yako yewebhu yekubata control panel Kana kuita chinjana uchishandisa FTP mutengi.
Maitiro acho akafanana nekukopa mafaira kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe paneel yako komputa.
Maitiro Ekubata Nzvimbo Saiti Pano
Kugovera webhusaiti yemunharaunda zvinoreva kuti uri mukati mako uchishandisa yako nzvimbo kugadza webhu bediener kubva kutanga. Izvi zvinoreva kuti iwe unobatsira kune zvese kubva kune Hardeware en sagteware is nie beskikbaar nie, maar net bandbreedte bandbreedte kugoverwa uye zvimwe zvinodiwa zvevakuru.
Kunyanyisa kudzora pane yako yekugamuchira nharaunda
Inogona kukurumidza kwebasa kushandurwa nguva
Sarudzo yako yemidziyo uye nevapi vekupa
Kuchengetedzeka kwekuzvibata kwako
Inogona kudhura zvakanyanya
Hazvigone kuitika munzvimbo dzekugara
Nyevero: Kubata webhu seva munzvimbo yako kwakaoma uye kunogona kudhura zvakanyanya. Izvo zvakare kazhinji haina kuvimbika ruit kugamuchira nemubatiri webasa.
1. Sarudza Zvishandiso uye sagteware
Basiese bediener-hardeware inogona kunge yakafanana nehombodo-ruit yako PC neimwe misiyano yakati siyanei. Muchokwadi, nehunyanzvi, iwe unogona kutora yako yako PC (kana laptop laptop) uye ichishandura kuva imba yewebhu server kana iwe uchinyatsoda.
Musiyano wakakosha ndewekuti iwe waunoda kuti webhusaiti yako ive sei uye nehuwandu hwevashanyi hwaunogona kubata. Sezvakaita nevashandisi vevhisi, iwe uch besluitwa kuchengeta ziso paneel verwerker, ndangariro, uye nzvimbo yekuchengetedza.
Kana iwe ukasarudza yepamusoro-kumagumo sevha yemidziyo laaste rek bediener, ek is zvakare uch besluitwa kuve nechokwadi chekuti izvo zvinehunyanzvi zvido zvemishini iyi zvinosangana. Izvi zvinosanganisira munzvimbo, kutonhora, uye simba.
Voorbeeld van die SMB-bediener van die SMB (mabviro)
Kana iwe uchida kuti sevhisi ive yakatendeseka iwe zvakare unofanirwa kufunga nezve redundancy mune Hardware. Semuenzaniso, kumhanyisa ako ekuchengetera kutyaira muRAID, pamwe inoshanda yekutarisa yemabhureki kumamwe madhiraivha.
Mamwe marapirwo ezvigadzirwa zvemidziyo akadai ma routers uye ma modem anofanirawo kukwanisa kubata zvakakura kwazvo zvemotokari.
Julle sagteware, parutivi kubva kune yako yekushandisa stelsel is ekwe uchazoda zvakare kutarisa paneel yako webhu bedienerplatform (panguva ino, Apache naNginx anonyanya kufarirwa pamusika). Izvi zvinoreva zvakare kuti iwe unofanirwa kuve nemhosva yekusango gadzira sagteware, asiwo rezinesi.
2. Ita shuwa yakakwana bandwydte
Internet bandwydte yakakoshawo kumhanyisa yako sevha. Muzviitiko zvakawanda, vazhinji vedu vakanaka neyakajairika Internet bandwydte sezvo tirikushandisa mashoma kubatana neInternet. Fungidzira kana vanhu makumi matatu vaiedza kushandisa yako Internet imba panguva imwe chete – iyo, uye pamwe zvakanyanya, ndizvo zvaungangodaro uri kutsvaga kutsigira.
Izvo zvinoda zvakare kutariswa ndeyako IP-kode. Zvizhinji zvirongwa zvepaInternet pamba zvinouya zvine simba IP’s dzakapihwa. Kuti umhanye sevha yewebhu, ek is unoda iyo tuli IP. Izvi zvinogona kana kubatwa nesevhisi yebasa yakadai se DynDNS kana nekutenga en masevhisi kubva kune yako Internet diensverskaffer (ISP).
Dzidza kuverenga bandbreedte yaunoda.
3. Kugadzira uye Kupa Webhusaiti
Chikamu chinotevera chakafanana nechiitiko chekushandisa webhu inopa wekupa webhu, kunze kwekuti iwe usawana chero tsigiro. Mafaira ako ewebhu anofanirwa kuendeswa kune webhost yako kuitira kuti saiti yako itange kushanda.
Ndeipi Sarudzo Yakanakisa Kubata Yeyako Webhusaiti?
Sezvauri is unogona kutaurira kubva kune iyo miviri mienzaniso pano yekushandisa inopa inopa kana yekuzvigadzira webhusaiti, iyo yekupedzisira inogona kukurumidza kuve inodhura uye yakaoma. Muchokwadi, ndi (nditende, ndakazviita kare).
Kunze kwekugutsikana kwekuzviita, kune mashoma mabhenefiti ekuita kudaro kunze kwekunge uri bhizinesi rine zvakatemerwa chaizvo zvinodiwa zvesaiti yako. Zvimwe zvacho zvinogona kuve zviri pamutemo kana zvekambani zvinodiwa, semuenzaniso.
Nekudaro, webhu rekugamuchira webhu vanopa vanhasi vanoshanda zvakasiyana-siyana uye mune dzakawanda nyaya dzakazaruka yekukurukura zvakakosha zvido nevatengi. Mune ruzhinji rwezviitiko zvakadaro, kushandisa yakajairwa kuronga chirongwa kazhinji kazhinji kwakaringana.
Kugadzirisa Zvako Zvako Zvigadziriso
Kugovera webhusaiti – kunyanya kana iwe ukasarudza kuitisa munharaunda, haimbo basa rekukanganwa-uye-kukanganwa. Bediener zviwanikwa manejimendi anozova akanyanya uye akakosha apo kukurumbira kwewebwerf yako kuri kukura. Izvi zvinonyanya kuitika kana iwe uine mawebhusaiti mazhinji akagarwa pasi pevhesi imwechete.
Imwe nguva yapfuura takabvunzana naMarc Werne, gebruik weLinux anotora mupetsi Gigatux.com, u kan die bestuurder van die hark-ruitbediener bedien. Heano mamwe matipi ake ekuita kuti zviwanikwa zviite pakupedzisira.
1. Sarudza CMS ine mwero
Iwe unogona kuda kushandisa Joomla of zvinhu zvakanyanya kushata, asi kana yako yekutambira danho iri isingasviki 500MB, ek is ungangoda kuongorora sarudzo yako.
WordPress of Drupal, semuenzaniso, yaizoita isina kureruka, inoshanduka imwe nzira iyo ichakuchengetedza iwe MB’s dzewebhu dhisiki uye bandwydte. Kazhinji zvishoma zvakawandisa uye zvisingaremi hazvienzane zvishoma zvinoshanda. Gadzira chati yedzimwe nzira dzako uye sarudza iyo CMS inonyanya kukodzera zvaunoda uye yako yekubatira pakket.
2. Vir foramu – Shandisa miniBB panzvimbo yeSMF
MiniBB inongotora isingasviki 2 MB inopesana ne10 + MB yeSMF, zvakadaro iri rakazara forum mhinduro ine vleisige repository yekuwedzera, ma extensions uye plugins.
Haasi kufarira miniBB?
Kune dzimwe nzira dzakasiyana-siyana dzisinganzwisisiki kupikisana nehurukuro dzemashoko makuru. PunBB, FluxBB uye AEF kuti titaure zvishomanana. Uyewo, ronga marongerwo emusangano wako usati waisa chero sarudzo: kana chinangwa chako chiri kusvika kune zviuru zvemamiriyoni evashandisi, kuvandudzwa kwekutora yako purogiramu kunogona kudiwa. Kana iwe uchida kuchengetedza vashandi ve-forum-chete kana kuti chinangwa kune nhamba shomanana yevashandisi, nenzira dzose unoshandisa zvishandiso zvaunowanikwa pane zvaunobatsira.
3. Shandisa yechitatu-bato retsamba mupetsi
Isa sagteware yemharidzo paneel yako diki webhu yekutambira rekening uye ichatanga kudya kumusoro kwediski yako uye bandbreedte. Zvinosuruvarisa kuti hapana zvakawanda zvekuita nezvazvo, uye idiki diki runyorwa runyorwa – OpenNewsletter – ichiri 640Kb uye iwe uch virwa kuverenga mune dzese nyaya dzekuchengetedza, zvakare.
Mukuenzanisa – MailChimp, mhinduro yakazara yetsamba inotanga pamutengo zero, kana vateereri vako vasingakwanisi kuzviisa zviuru zviviri uye iwe unovavarira kutumira kwete anopfuura gumi nemaviri maema pamwedzi.
Ese dink aan anogona kuve akagadziridzwa saka iwe haufanire kutora ako pachako, uye iwe unogona kubatanidza iyo nhau ne Facebook.
Nzira dzakanaka kune MailChimp ndidzo Constant Kontak uye BenchmarkMail, en chete muganho unopihwa nezvinyorwa zvekunyorera – vanhu vanogona chete kusaina kubva pafomu rako.
Ruzhinji rwebhizimusi diki uye varidzi vewebhu webhusaiti pane yakaderera bhajeti yekushandisa yakagovana mapakeji ekugashira kuitira kuchengetedza mukudyara. Dzimwe nguva kukwidziridzwa kuri nenzira dzese dzinodiwa kuti uwedzere kuita uye kugamuchira vateereri vakawandisa uye verkeer iyo yaunounza, asi kana metakwanise, iwe unogona kuchengetedza sevha zviwanikwa nekusho zore.
Gebruik WordPress vanogona kuisa W3 Total Cache asi kana met behulp van shandise WordPress. Semuenzaniso, Joomla anogona kuvimba Cache Cleaner of Jot Cache; nepo Drupal ine akati wandei cache-prestasie zvishandiso futi.
5. Nguva dzose rega zvinyorwa zve spam
Bvisa-spam nenzira-e-pos, blogblog, terugbesorgde URL’s uye mafaira anowedzera mavhareji is beskikbaar in die databasis.
Zviite kanenge kamwe chete pasvondo kuti udzivise nyaya dzekurangarira (semuenzaniso, WordPress kuburitswa kwemaonero kunoshanda chete kusvika pandangariro ye64Ma, karaako, puraango, misha, misha, misha, misha, misha, misha, misha, misha).
6. Kana zvichikwanisika, shandisa kunze zvinyorwa
Kana muenzi wako achibvumidza kure kure databasis inobatanidza, nenzira dzose shandisa iyo. Masheya ekunze anobatsira kurerutsa kushandiswa kwewebhu dhisiki kwota nekuti ivo vanochengeta zvemukati wako kunze kweakaunzi rekening yako. Nekudaro, ramba uchifunga kuti madhijitari ari kure anogona kudhura zvakanyanya uye kunetsekana kune vanoshandisa magumo.
7. Shandisa wechitatu-bato faira yekubata masevhisi
Bata zvinhu zvese zvinoridzwa pane yekunze faira yekubata sevhisi, seP Photobucket, Vimeo, YouTube, 4 Shared, Giphy, zvichingodaro.
Iwe haufanire kubvumira vashanyi vako, vatengi kana vaverengi kuti vatore zvinyorwa kumaseva ako kana zviwanikwa zvako zviri zvishoma.
8. Nguva dzose aflaai uye susa mafaira egi
Log mafaira akagadzirwa kuti iwe ugare uine ruzivo nezve webhusaiti yako webhusaiti, asi hapana kushandiswa kwavo pane sevha: kana iwe usingatore uye uchivabvisa kamwechete pasvondo, kukura kwavo kuchakura kutiande wigare Izvi zvinonyanya kuitika kune maviri cPanel logs:
/ musha / user / public_html / error_log
/ musha / gebruiker / tmp / awstats /
Iyo faipi_log faira inowanzobatanidza zvikanganiso zvine simba seye PHP yambiro, kukanganisa kwe databasis (zvisiri pamutemo mabvumirano, nezvimwewo) uye mhinduro dze spam dzisina kuenda. Tarisa iyi faira vhiki nevhiki nezve zvikanganiso uye yambiro, wobva wabvisa.
Iyo / awstats / folda, ruit zvinopesana, ine ese ekuwana marogi uye manhamba matanda ewebsite yako. Iwe unofanirwa kudzima sagteware yeAaStats muakaunti yako kuti udzivise kuwedzera kwekushandisa wechirongwa sezvo chirongwa ichi chingozvichengetera mafaira zvawo, kana kana iwe usingakwanise nekuda kwemikana inorambidzwazuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzi.
Webhusaiti Inotarisira FAQ
Chii chinonzi webhost?
Webhusaiti webhusaiti haingori nzvimbo yaunogara iwe webhusaiti. Iyo zvakare inokomberedza sagteware zvinodiwa uye mutengo, pamwe nebandwidth uye toni yemamwe madiki-anodikanwa anoda kutarisirwa. Kuti uwane zvimwe zvakawanda – ini yakatsanangura mashandisiro anoita webhu webhu kutungamira.
Kugovera mushandi webasa vs kuzvibata-wega: Ndeipi misiyano mikuru?
Webhu revatambi vanopa sevhisi vakamisa nharaunda dzakatemerwa kutambira mawebhusaiti. Ivo vanogadzikiswa nekuda kwechinangwa ichi uye nekuda kwekuti vanozviita zvakawandisa, vanowanzogona kupa sevhisi zvakachipa kupfuura nzvimbo yekuzvitambira.
Ek is nie hier nie kuitirwa webhusaiti?
Hongu, webhu yekubata ndeimwe yezvinhu zvakakosha zvinodiwa kuti umhande webhusaiti. Kuti udzidze zvakawanda – Heino runyorwa is die beste webhostingsonderneming Ndakakurudzira.
Ko zita remuzinda rinofanirwa hier kumhanyisa webhusaiti yangu?
‘N Domain zita ndiko kero yeyako webhusaiti. Pasina iyo, vashandisi vako havangave neimwe nzira yekuuya kune yako webhusaiti kunze kwekunge vaziva en chaiyo IP-kode. Dzidza zvakawanda nezve sei zita remuzinda rinoshanda.
Ino GoDaddy inotora mawebhusaiti hier?
Hongu, GoDaddy ndeye webhu inopa webhu uye imwe yezvigadzirwa zvayo ndeye webhusaiti.
Kugovana kwakagoverwa kwakakwanira saiti yangu hier?
Kana webhusaiti yako iri nyowani, kugoverwa kwekugovana kunowanzo kunge kwakakwana. Kugona kwekugoverwa kwakagovana kunosiyana kubva kune wekugamuchira. Mamwe mawebhu anotapa, semuenzaniso, SiteGround, uine zvirongwa zvakasimba kwazvo kunyange pakati pekugovana sarudzo dzekugamuchira.
Kune marudzi mangani ekutambira aripo?
Kune mana makuru emhando dzewebhu webhu dzinogovaniswa, VPS, iCloud, uye yakatsaurwa yekutambira. Imwe neimwe inopa yakasiyana madhigirii ekuita, kuvimbika, uye kuchengeteka.
Ndeipi mhando yekusvitsa yakanyanya kunaka?
"Zvakanakisa" ihama – zvakanakira webhusaiti yangu zvinogona kunge zvisiri zvako. Kazhinji kana iwe uri mutsva, kugovana kwekugovana kunofanirwa kunge kuri "kwakanyanya" nzvimbo yekutanga. Servers dzakatsaurira ndedzakanyanya mhando dzekutambira asi dzinonyanya kudhura futi (saka hazvikurudzirwe kune newbies).
Ndinogona hier kushandisa WordPress paneel wangu webhost?
Mazhinji webhu anobatsira ekupa vatengi nhasi vanokutendera iwe kuti uise dzakasiyana siyana zvinoshandiswa mukurumbira webhu. Izvi zvinowanzosanganisira WordPress, Drupal, Joomla, uye nevamwe vazhinji. Kuti uve nechokwadi chekuti toepassing yaunoda kuisirwa zvirinani kuti utarise nemubatsiri wako.
Nei webhusaiti yangu ichinonoka?
Spoed yewsite inogona kutsamira pazvinhu zvakawanda. Imwe yeiyi maitiro ako webhusaiti zvakanaka. Kuti udzidze zviri kukanganisa webhusaiti yako, shandisa chishandiso seWebPageTest kana GT Metrix. Kumhanyisa bvunzo pano kuchaputsa zvinyorwa zvenguva dzekuremerwa, zvichikugonesa kuti uone nzvimbo dze lag munguva yako yekuregedza.
Kuita webhusaiti webhusaiti kunoshanda sei?
Kugamuchira webhusaiti kunosanganisira webhu-bediener en u kan ook die kushandira yako webhusaiti mafaera kune vashanyi pasi rese rewebhu. Izvo zvakakosha zvinosanganisirwa mafaira ewebsite yako, sevha yewebhu, uye zita rezita kuburikidza naro iro saiti yako rinowanikwa.
Chii chinonzi Cloud hosting?
Sezvinoreva zita zvarinoreva, vakagovana-rekeningrekening ‘deel’ zviwanikwa zveimwe-bediener. Mune Cloud inobata, maseva mazhinji anochengetedza zviwanikwa zawo mu ‘Cloud’ uye zviwanikwa izvi zvinobva zvaparadzaniswa ku Cloud Cloud-rekening.
Chii chinotarisirwa kugamuchira?
Yakachengetedzwa yekutambira imhando yewebhu webhusaiti iyo iyo yekupa sevhisi inotora kune basa rekuchengetedza en tekinoroji kuita kweakaunti yako. Izvi zvinowanzoenderana nehunyanzvi hwekugadziridza uye sagteware.
Zvakawanda pakubata webhusaiti
Mari yakawanda sei kuitisa webhusaiti yako
Nzira yekufambisa sei webhusaiti yako pane imwe webhupu yehutano
Maitiro ekuti webhusaiti yako yemahara
WHSR webhosting resensies (groot indeks tabel)
Nzira yekutenga zita renzvimbo (kubva kune mabregistrars kana kuti varipo varidzi)
Nzira yekusika yako yekutanga webhusaiti (3 dae gelede)
Nzira yekutangira bha blog uchishandisa WordPress
Nzira yekushandura kubva paHTTP kusvika kuHTTPS: Nzira yeA-to-Z ye SSL
Kugovera webhusaiti kunongoreva kuve nechokwadi chekuti webhusaiti yako inogona kuwanikwa pa万维网（WWW）。 Izvi zvinowanzoitwa mune